Valin'ny fikarohana ho an'ny: tantara foronina
Jona 21, 2022 ny worldbook
"Efa namaky tantara foronina tena mahafinaritra momba ny vehivavy pelaka aho, saingy matetika aho no nahatsapa fa niankina tamin'ny lafiny maizina kokoa izy ireo," hoy ny mpanoratra Laura Kay. Ho an'ilay mpanoratra monina any Londres, dia ara-dalàna raha ny tantara nosoratany voalohany, The Split, dia tokony ho hatsikana tantaram-pitiavana. “Tena nanoratra ny tantara tiako hovakiana aho,” hoy izy. Navoaka tamin'ny… hamaky bebe kokoa
Jona 19, 2022 ny worldbook
Sarah Hall, 48 taona, dia mpanoratra teraka Cumbrian amin'ny tantara sy tantara fohy nahazo loka, anisan'izany i Ramatoa Fox sy The Electric Michelangelo. Ny sanganasany farany, Burntcoat, dia iray amin'ireo sangan'asa lava voalohany amin'ny tantara foronina amin'ny vanim-potoanan'ny covid izay miady amin'ny fiainana mandritra sy ela taorian'ny… hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy510 manaraka →